श्रीमान विदेशवाट आए भनेर विमानस्थलमा जाँदा, अर्कै महिला साथमा भेटेपछि…. (भिडियो सहित)
Homeसमाचारश्रीमान विदेशवाट आए भनेर विमानस्थलमा जाँदा, अर्कै महिला साथमा भेटेपछि…. (भिडियो सहित)
February 27, 2021 admin समाचार 6887
गोरखाकी एक महिला वैदेशिक रो’जगारीका लागि विदेश गएका श्रीमानलाई लिन वि’मान स्थल गइन् । उनको २०६४ सालमा विवाह भएको थियो । उनी १५ वर्षको उमेरमा ‘विवाह भएको थियो । उनको श्रीमानको विवाहित भइ’सकेको रहेछ, उनका एक छोरा पनि थिए । तर उनले जता गयो उतै पछि लागेर फकाए । जिवन गिरी नामका उनका श्रीमानले पछि लागेर जसरी पनि तिमीसंगै विवाह गर्छु भनेर छो’ड्दै छोडेनन् ।
अल्लारे बुद्धि भएका कार’ण अरु केही सोच्न सकिनन् । विवाहित पुरुषसंग विवाह गरेर गइन् । उनीसंग विवाह गरे’पछि छोरा छोडेर सौता अर्कैसंग विवाह गरेर गइन् । उनको पनि छोराछोरी पनि जन्मिए । उनीहरु व’जारमा वसेका थिए । त्यही बेला श्रीमानले तिमी घर गएर बस । खर्च पनि कम हुन्छ भनेर गाउँ पठाए । उनी गाउँ गएर ब’सिन् । तर त्यसपछि श्रीमानको ब्य’वहार फेरीयो ।
विदेश गएका श्रीमानले वा’स्ता गर्न छोडे । फोन पनि गर्थेनन् । गाउँका दाजुभाईले तिम्रो श्रीमान विदेशवाट आ’उँदैछन् भनेर जानकारी दिए । त्यही मितिमा उनी काठमाडौ विमा’नस्थलमा श्रीामनलाई लिन पुगिन् । तर उनको श्रीमानलाई लिन अर्कै महिला पनि पुगेको देखेपछि उनी छाँ’गावाट ख’सेजस्तो भइन् । अर्को महिलालाई आफु आएको जान’कारी दिने तर मलाई किन जानकारी दि’नुभएन ? प्रश्न गर्दा तिमीलाई दुख हुन्छ भनेर सम्झा’उने कोशिस गरे ।
विमानस्थलमै वि’वाद भएपछि उनीहरुलाई सिधै गौशाला स्थित प्रहरी कार्यालय लिएर गए । त्यसपछि एक पट’कलाई माफ गरेर उनले श्रीमान स्वीकारेर आइन् । प्रहरी कार्यालयमा सम्झौ’ता गरेर उनी गाउँ फर्किइन् । सासु विरामी भएर काठमाडौमा उपचार भइरहेको थियो, म आमालाई लिएर आउँछु तिमी घर जाउ भनेर भनेर पठा’एको महिलाको भनाई छ । – इताजा खबरबाट
पल शाह र उनकी प्रेमिका भनेर चर्चामा आएकी गरिमाले खे’लेको दोहोरी गीत सार्वजनिक (भिडियो सहित)
कोरोना संक्र’मणबाट २८ वर्षिय इन्जिनियर सन्जिब पन्तको नि’धन
May 3, 2021 admin समाचार 6555
कोभिड- १९ को संक्रम’णबाट इलेक्ट्रीकल इन्जिनियर सन्जिब पन्तको नि’धन भएको छ । २८ वर्षिय पन्तको शनिवार चित’वनमा अल्पा:युमै नि’धन भएको हो। कोभिड-१९ संक्र’मित पन्त अस्पताल भर्ना भएको तीन भएको थियो । अध्यापन पेशामा का’र्यरत पन्तले
May 17, 2021 admin समाचार 5946
June 4, 2021 admin समाचार 4763